Ama-tattoo esizwe engalweni | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
Ama-tattoo esizwe engalweni yakhe
USusana godoy | | Ama-tattoo avuliwe, Ama-tattoo engalweni
Kukhona labo abacabanga ukuthi ama-tattoos esizwe angama-tattoos aphelelwe yisikhathi, kepha akukho okuqhubekayo eqinisweni. Abantu besizwe basabathanda abantu abaningi futhi ukuthi imfashini ihlobene kakhulu ngoba ukwakheka okuthile kwe-tattoo abanye abantu abangayeka ukukuthanda, kodwa kwabanye, Angaba yimiklamo ekhanga kakhulu yokwenza i-tattoo emzimbeni.
Ama-tattoos esizwe engalweni uhlobo lohlobo lwe-tattoo oluvame ukuthwalwa ngabesilisa, kepha nabesifazane bangaluthwala uma bethanda. Endabeni yokunambitha akukho okubhaliwe futhi okubalulekile ukuthi umuntu othola i-tattoo yesizwe engalweni uzizwa ekhululekile nge-tattoo yakhe.
Lezi zesizwe nazo zingaba zihle kakhulu futhi zibe nobuhle uma zenziwa ngomugqa omuhle. Ama-tattoos esizwe anomlando omude futhi kunabantu abaningi okwathi emakhulwini eminyaka edlule benza lolu hlobo lwamathambo. Mhlawumbe yingakho, kuze kube namuhla, besafunwa kakhulu ngabantu, abesilisa nabesifazane banoma iluphi usiko noma ingxenye yomhlaba.
Kunezitayela eziningi ongazithola futhi kuzoncika kokuthandayo uma ukhetha okukodwa noma okunye. Uma uthanda idizayini ungayivumelanisa nomzimba wakho ukuze ilingane kahle. Ama-tattoo esizwe engalweni ayindlela enhle futhi ungakhetha indawo yengalo oyithanda kakhulu. Kukhona ngisho nalabo abazidwebela lesi sizwe ngendlela yesongo ukuze silingane kahle engalweni. Khetha idizayini oyithanda kakhulu bese ukhetha umdwebi we-tattoo omthandayo futhi owaziyo ukuthi isitayela sakhe sifanelana nokuthandayo. Umdwebo wesizwe engalweni, uma uthanda ubuhlanga nemvelaphi yazo, kuzoba yi-tattoo ephumelela kakhulu.
1 Izinhlobo zamathambo wesizwe engalweni
1.1 Amadragoni esizwe
1.2 Amabhubesi esizwe
1.3 Amaketanga esizwe
1.4 Isizwe samaMaya
Izinhlobo zamathambo wesizwe engalweni
Njengoba sazi kahle, uma kukhona esinye sezidalwa ezikhona ingxenye yenganekwane nezinganekwane, lezi yizilo. Sizibone ngezindlela eziningi, ikakhulukazi esikrinini esincane noma esikhulu. Kepha manje badlula esikhunjeni sethu ngendlela yama-tattoos edrako wesizwe. Kunezincazelo eziningi ezinikezwe zona, ngoba kuya ngesiko.
Kwabanye bekufana nabadali noma abavikeli, kepha kwabanye, ubudlelwane babo babusondele ekufeni. Vele uma sikhuluma nge imidwebo yedrako yesizwe, singakwazi ukukuvumelanisa nezincazelo esizithanda kakhulu kanye nosayizi esiwufunayo, kuya ngengxenye yomzimba lapho sizoyisa khona. Izinketho ziningi futhi ziyahlukahluka. Kepha bonke bahlala benophawu lokuhlala bephethe.
Kungaba kanjani okuncane, ibhubesi lingesinye sezilwane ezinamandla kakhulu. Ngakho-ke, bambeke njengenkosi yehlathi. Kuvamile ukuthi ixhunyaniswe namandla noma isibindi kanye namandla. I- imidwebo yezingonyama zesizwe futhi benza ukumelwa kwazo zonke lezi zici ezixhunyaniswe nezwe elingaphezulu kukamoya. Ngakho-ke, kufanele sihlale sikhumbula imigqa nezimo ezizokhetha isilwane esinjengalesi. Ungakhetha ukugqoka kuphela ubuso bakho noma umzimba ogcwele ngobuhle obukhulu esikhunjeni sakho.
Ngenye yezinketho ezibukwa kakhulu lapho sikhuluma ngazo ama-tattoos wesizwe. Amaketanga angahlobisa izingxenye ezahlukahlukene zomzimba kodwa kuzo zonke, izingalo ziyizintandokazi zakhe. Izindlela ezithile zingene ngaphakathi futhi kwesinye isikhathi zibukeka njengameva, ngakho-ke izincazelo zazo ziyohluka lapho. Kuyiqiniso ukuthi njengomthetho ojwayelekile, amaketanga afana nokuba ngaphansi kwengcindezelo ethile. Kepha futhi nokuthi singayinikeza incazelo evumelana kahle nenye ngayinye. Njengoba izizwe azinakho lokho kuqeda ukuvalwa njengamaketanga ayisisekelo. Ngalesi sizathu, inkululeko nezinkolelo yizona ezimhlaselayo.
AmaMaya ayegqoke imidwebo eminingi futhi ngayinye yazo yayinencazelo entsha. Izimpawu zalo zihlale iminyaka eminingi futhi yingakho isiko lisagcinwa nanamuhla. Kokubili ukuvikelwa nezinkolelo ezingokomoya kwakuyizincazelo ezinkulu zamathambo akhe. Izilwane noma umhlaba nelanga nakho kwavela phakathi kwabo. Ukuchuma nezinguquko nakho kuyizimpawu eziqhamuka kubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Ama-tattoo avuliwe » Ama-tattoo esizwe engalweni yakhe
UJuan Challco Lenes kusho
Kuyathakazelisa wonke ama-tataujes
Phendula uJuan Challco Lenes
Ama-tattoo amahle wabesifazane nabesilisa: umbuzo wobulili?
Ama-tattoos aseJapane, funda ukuwahlukanisa